वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
जापानमा नेपाली पुरुष महिला कामदारलाई रोजगारको अवसर, मासिक तलब एक लाख ७९ हजार बढि
काठमाडौँ, २, जेठ ।जापानले नेपाली कामदारको माग गरेको छ । जापानको विभिन्न सहरमा रहेको विभिन्न कम्पनीले विभिन्न पदका लागि ८...
रोमानियाले माग्यो पुरुष महिला नेपाली कामदार
काठमाडौँ, २, जेठ । रोमानियाले नेपाली कामदारको माग गरेको छ । jordan river recruitment srl कम्पनीले विभिन्न पदका लागि ४३...
काठमाडौँ, २७, वैशाख । वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौंले नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेको...
काठमाडौँ, २७, वैशाख । युएईको एक कम्पनीले नेपाली महिला पुरुष कामदार माग गरेको छ । युएई सहरमा रहेको ISQ DELIVERY...
जोर्डनमा फ्रि भिषा, फ्रि टिकट र शून्य लागतमा २० जना महिला कामदारको माग, मासिक तलब कति ?
काठमाडौँ, २७, वैशाख । जोर्डनको एक कम्पनीले महिला कामदारको माग गरेको छ । अम्मान सहरमा रहेको AJWAA EST कम्पनीले २०...
मासिक डेढ लाख बढी तलबसहित जापानमा पुरुष कामदारको माग
काठमाडौँ, २७, वैशाख ।जापान एक कम्पनीले नेपाली पुरुष कामदारको माग गरेको छ । जापानको शिनसाकुरा सहरमा रहेको ER PLUS COOPERATIVE...
जापानमा नेपाली कामदारलाई रोजगारको अवसर, मासिक तलब एक लाख ७१ हजार बढि
काठमाडौँ, २६, वैशाख । जापानले नेपाली कामदारको माग गरेको छ । जापानको विभिन्न सहरमा रहेको विभिन्न कम्पनीले ८५ जना पुरुष...
रोजगारीका लागि युरोप पठाईदिने भन्दै ४ करोड बढी ठगी गरेर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ, २५, वैशाख । वैदेशिक रोजगार विभागले जेन्युन एजुकेसन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिका सञ्चालक सुजन भट्टराईविरुद्व वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण मुद्दा दायर...
साइप्रसले माग्यो नेपाली कामदार, मासिक तलब एक लाख १५ हजार बढि
काठमाडौँ, २५, वैशाख । साइप्रसको विभिन्न कम्पनीले नेपाली कामदारको माग गरेको छ । साइप्रस सहरमा रहेको विभिन्न कम्पनीले विभिन्न पदका...
वैदेशिक रोजगारद्धारा ठगी गर्ने १० जनाविरूद्व मुद्दा दायर
काठमाडौँ, २३, वैशाख ।वैदेशिक रोजगार विभागले ठगी गर्ने दश जनाविरूद्व मुद्दा दायर गरेकोे छ ।विभागले बिहीबार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा ८...
श्रम स्वीकृति लिँदा कामदार स्वयंले अनलाइन मार्फत आवेदन गर्न आग्रह
काठमाडौँ, २३, वैशाख ।वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय ताहाचलले व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरणको प्रक्रिया मार्फत श्रम स्वीकृति लिँदा कामदार स्वयंले अनलाइन...
काठमाडौँ, २२, वैशाख । मलेसियामा नेपालीसहित अन्य विदेशी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सरकारले यसअघिको १ हजार...
शून्य लागतमा जोर्डनले माग्यो नेपाली कामदार, मासिक तलब कति ?
काठमाडौँ, २१, वैशाख ।जोर्डनको एक कम्पनीले नेपाली कामदारको माग गरेको छ । अमान सहरमा रहेको एक कम्पनीले घरेलु कामदारका लागि...
न्यूनतम तलब १ हजार ५ सय रिंगेटको मागपत्र पेश गर्न रोजगारदातालाई मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको आग्रह
काठमाडौँ, २१, वैशाख । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले कामदारको तलब न्यूनतम १ हजार ५ सय रिंगेट भएको भन्दै सोही अनुसार मागपत्र...
युएईको एक कम्पनीले माग्यो महिला कामदार,मासिक तलब र सुविधा के के ?
काठमाडौँ, २०, वैशाख ।युएईको एक कम्पनीले नेपाली महिला कामदार माग गरेको छ । युएई मा रहेको PATONIA BEAUTY SALON कम्पनीले...
कुवेतले माग्यो भारी सङ्ख्यामा नेपाली पुरुष महिला कामदार, मासिक तलब कति ?
काठमाडौँ, १९, वैशाख ।कुवेतको एक कम्पनीले भारी सङ्ख्यामा नेपाली कामदारको माग गरेको छ । कुवेत सहरमा रहेको valve cafe and...
नेपाली ड्राइभरलाई कतारमा रोजगारीको अवसर, मासिक तलब कति ?
काठमाडौँ, १८, वैशाख । कतारको एक कम्पनीले नेपाली कामदारको माग गरेको छ । दोहा सहरमा रहेको turki bin thabit trad....
कुवेतको एक कम्पनीमा नेपाली महिला कामदारका लागि रोजगारीको अवसर, मासिक तलब कति ?
कुवेतको एक कम्पनीले नेपाली कामदारको माग गरेको छ । कुवेत सहरमा रहेको ramada for cosmetics co. कम्पनीले विभिन्न पदका लागि...
साइप्रसको एक कम्पनी माग्यो नेपाली कामदार, मासिक तलब तथा सेवासुविधा कस्तो ?
काठमाडौँ, १८, वैशाख । साइप्रसको एक कम्पनीले नेपाली कामदारको माग गरेको छ । साइप्रस सहरमा रहेको एक cas recruitment group...
नेपाली कामदारका लागि रोमानियामा वैदेशिक रोजगारीको अवसर, मासिक तलब कति ?
काठमाडौँ, १६, वैशाख ।रोमानियाको एक कम्पनीले भारी सङ्ख्यामा नेपाली कामदारको माग गरेको छ । रोमानिया सहरमा रहेको workpower srl कम्पनीले...